Isu tinoshanda nevatengi vakaomesesa vatengi saka basa redu rakawanda harisi rakaoma… zviri kungoedza kutarisa vatengi vedu, kukoshesa basa ravo, uye kuita pamazano akagadzirwa.
Sei uchiri kuchengeta vashandi vekutengesa pamubhadharo ivo vasiri kuvhara vatungamiriri vanokodzera?
Nei uri kuisa mari mumushandirapamwe mutsva iwe usina kubvumira yekupedzisira kuti ipedze
Nei uri kubhadhara mubhadharo wega wega kana usiri kusefa zvisina kunaka mazwi akakosha kana kutoyedza akasiyana mavhezheni ako kana mapeji ekumhara?
Nei uri kutenga webhusaiti nyowani isingasanganisi nhare, dzekutsvaga uye dzekushandura nzira?
Nei iwe uchibhadhara kubhadhara yako saiti kana isina kugadzirirwa kutsvaga?
Nei urikuedza kuyera pamazwi akakosha iwe ausingazombomira pamusoro pawo nekuregeredza iwo marefu-muswe aunogona?
Nei uri kuyedza kurongedza zvirinani pane mazwi akakosha asingashanduke kuita kutengesa?
Sei uri kuongorora analytics vhiki yega yega kana iwe usati waisa zviitiko, zvinangwa, kutendeuka kuteedzera, ecommerce kusangana kana kutengesa funnels?
Nei urikushambadzira paFacebook iwe usina email yekurera chirongwa?
Nei uri kubloga uye usiri kusimudzira zvemukati zvawakapedza nguva yakawandisa uchinyora?
Nei uri kunyora zvimwe zvirimo iwe usina kana pikicha yako pachako pane yako saiti kuti vanhu vazive zvauri?
Ini ndinowanzo kuseka nevanhu kuti ini ndiri wezvemagariro murairidzi wezano asi ini kashoma kuwana mukana wekubvunza nevanhu nezve zvemagariro midhiya. Ichokwadi chaizvo, zvakadaro. Nhasi mumwe wevatengi vedu achangotanga peji reFacebook kukambani yavo… Mwedzi mitanhatu mushure takatanga kushanda navo. Kwaizove kusave nehanya kwandiri kuti ndiite kuti vanyurure pasocial media zano yakapihwa kuti vanga vasina kuburitsa basa rese ravaitoita.
Wese munhu anogara achimanikidza vashambadziri kuti vaite chimwe chinhu chitsva, chakasiyana, chinonakidza, nezvimwe ... asi pasina hwaro hwakakura hwekuvakira pamusoro, zvese kutambisa nguva nemari. Chii chauri kushanda pane chausingafanire kuve?
Doug, yakanaka post. Kungo da kuziva zvauri kushandisa kugadzira kusanganisirwa uku kubva kukopa nekuisa mumabloggi ako:
Ie Copy/namira "Chii chauri kushanda nacho chausingafanire kunge chiri?"
-> Verenga zvimwe: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh”
Iyo inoteedzera kuti vangani vanhu vari kuita kopi uye, kana vakashandisa chinongedzo chakapihwa, chinokuzivisa iwe kuti vakadzoka kusaiti yako kuburikidza neyakakopwa zvinyorwa! Zvinhu zvakanaka!